ယူအက်စ်အေခုနှစ်တွင်မိသားစုအခန်းကဏ္ဍ | USAHello | USAHello
ယူအက်စ်အေမှပြန်လည်နေရာချထားရေးသို့မဟုတ်လူဝင်မှုသင့်မိသားစုအပေါ်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ. ပြောင်းလဲနေသောမိသားစုအခန်းကဏ္ဍသစ်တစ်ခုဘဝမှညှိ၏အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းများကိုတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်. USA တွင်မိသားစုအခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်.
Lisa ကို Krantz ဓာတ်ပုံယဉျကြေး, Creative Commons
သင် USA တွင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်ရှိစေခြင်းငှါအကြီးမားဆုံးကွဲပြားမှုတစ်ခုမှာကွဲပြားခြားနားသောကျားမအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်. USA တွင်, အမျိုးသမီးတွေမကြာခဏအိမ်၏အပြင်ဘက်အလုပ်မလုပ်. အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအိမ်မှုကိစ္စဝေမျှ. အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးအမြိုးသားတို့စောင့်ရှောက်မှုယူ. တခါတလေ, သူတို့အိမျတျောသို့မဟုတ်ချက်ပြုတ်ညစာသန့်ရှင်းရေးဖို့အသုံးပြုကြသည်မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အထီးဒုက္ခသည်များစိတ်ပျက်ခံစားရတယ်. ဒါပေမယ့် USA တွင်, အိမ်သူအိမ်သားနှင့်ကလေးများနှင့်အတူထွက်ကူညီပေးနေလူတဖြစ်ခြင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ရှုမြင်.
သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် USA တွင်အမျိုးသမီးများကို.
USA တွင်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသင့်အိမ်နိုင်ငံတွင်ထက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်. ဒုက္ခသည်နှင့်လူဝင်မှုကလေးများမကြာခဏအများကြီးပိုမြန်၎င်းတို့၏မိဘများထက်ညှိနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အသက်တာကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်. သူတို့ဟာမကြာခဏအဖြစ်ကောင်းစွာ၎င်းတို့၏မိဘများထက်ပိုမြန်အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူ. ဤသည်မိဘများအဖြစ်နှင့်သင့်သားသမီးတို့အဘို့သင်တို့အဘို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်, သင်န်းကျင်အရကူညီဖို့ရန်နှင့်သင်တို့အဘို့ဘာသာပြန်ဆိုသင်၏သားသမီးအပေါ်မူတည်ပေမည်အထူးသဖြင့်ကတည်းက.
အတော်များများကအမေရိကန်တွေ daycare စင်တာများမှသူတို့သားသမီးပေးပို့. ဤသည်ကိုသူတို့အိမ်၏အပြင်ဘက်တစ်စုံတစ်ဦးကိုစောင့်ကြည့်နေကြသည်ကိုဆိုလိုသည်. တချို့ဒုက္ခသည်များ, ဒီဟာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အခြေအနေ. သူတို့ကိုဂရုစိုက်ကူညီပေးဖို့သင်အမြဲသင်တို့နှင့်အတူရှိအိမ်တွင်သင်၏သားသမီးရှိခဲ့ကြပေမည်ဒါမှမဟုတ်သင်ကအဘိုးအဘွားခဲ့. USA တွင်, အများအပြားအိမ်နီးချင်းများတစ်ဦးချင်းစီကတခြားရှယ်ယာကလေးကကားတစ်စီးကကူညီ. သင်သည်အခြားဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအနီးအသက်ရှင်လျှင်, ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးဝေမျှဖို့သူတို့ကိုတောငျးဆိုစဉ်းစား.
မျက်နှာသစ်မိဘများတခါတရံကသူတို့အိမ်ပြန်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်ဘယ်လောက်မှမိမိတို့သားသမီးရဲ့အပြုအမူအပြောင်းအလဲများကြောင့်ခဲယဉ်းအချိန်ရှိသည်. သင်သည်သူတို့၏အသစ်သောအပြုအမူအချို့ကိုမကြိုက်မပြုစေခြင်းငှါ, သငျတို့သရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် USA တွင်မိဘ. ထိုအသေး, က hard ဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်, ထို့အပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်သူတို့ကိုအောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးနေစဉ်သင်ဆဲသင်၏သားသမီးရန်သင့်ယဉ်ကျေးမှု၏အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်ရှောက်သွားနိုင်ပါလိမ့်မည်.
အမေရိကရှိကလေးများကသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးရန်ဥပဒေများရှိ, ထိုတရားသည်သင်၏သားသမီးအလွဲသုံးစားပညတ္တိကျမ်းဆန့်ကျင်ဆိုလိုတယ်. ဖက်ဒရယ်ဥပဒေသင်၏သားသမီးမှအလေးအနက်ထိခိုက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်အတွက်သူတို့ကိုကိုထည့်လေ့မရှိကြောင်းဘာမှအဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုမတော်တဆမှုမဟုတျကွောငျးဘာမှကိုဆိုလိုသည်နှင့်သေးငယ်တဲ့အနာကနေကျိုးအရိုးကဲ့သို့သောအလေးအနက်ဒဏ်ရာအထိနိုင်ပါတယ်. ကလေးများဒဏ်ရာမိဘထိုသူငယ်ကိုထိခိုက်ဖို့ဆိုလိုဘူးလျှင်ပင်အလွဲသုံးစားမှုဖြစ်ကြောင်း. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်း, ထိုကဲ့သို့သောအောက်ခြေအပေါ်ကလေးတစ်ဦး spanking အဖြစ်, ခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့်အကြံပြုသည်မဟုတ်.
သင်တို့သည်လည်းစိတ်ခံစားမှုသင့်ကလေးအလွဲသုံးစားခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်. စိတ်ခံစားမှုအလွဲသုံးစားမှုအပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးဆဲကနေကလေးတစ်ဦးကိုတားဆီးနိုငျသောအရာတစ်ခုခုကိုဆိုလိုသည်. စိတ်ခံစားမှုအလွဲသုံးစားမှုအဆက်မပြတ်ဝေဖန်မှုများပါဝင်နိုင်ပါသည်, ခြိမ်းခြောက်မှုများ, သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ခံရ, အဖြစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသိုထားသော, ထောက်ပံ့, သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်မှု.
ကလေးသူငယ်လျစ်လျူရှုမိဘတစ်ဦးကသူတို့သားသမီးရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ပေးမထားဘူးတာကိုဆိုလိုတယ်. USA တွင်, သင်တစ်ယောက်တည်းအိမ်တွင်ငယ်ရွယ်သောကလေးများမှထွက်ခွာရန်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်. သင်တို့သည်လည်းအိမ်ကနေတစ်ဦးတည်းကလေးငယ်များစွန့်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်, သူတို့တစ်တွေတွန်းလှည်း၌ရှိကြ၏လျှင်ပင်, တစ်ဦးကစားကွင်းပေါ်, တစ်ဆိုင်မှာ, ရုံး, စာကြည့်တိုက်, သို့မဟုတ်ကား. ကလေးငယ်များကြီးကြပ်ရပါမည်
စွန့်ခွာယခုလျစ်လျူရှုတဲ့ပုံစံအဖြစ်များစွာသောပြည်နယ်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်. ယေဘူယျအားဖြင့်, ကလေးတစ်ဦးကလေးသူငယ်အခတယောက်တည်းကျန်ရစ်သောခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးလျှင်ကလေးတစ်ဦးသည်သူ၏မိဘသည်အဘယ်မှာရှိကိုသိသို့မဟုတ်မပါဘူးဆိုရင်စွန့်ပစ်စဉ်းစားသည်.
အတော်များများကအဟောင်းတွေအသစ်ရောက်ရှိလာသောတစ်ခက်အချိန်ရှိသည် theUSA ဘဝမှညှိ. ကမ္ဘာတဝှမ်းနိုင်ငံအများအပြားမှာတော့, အကွီးအကဲမြားလေးစားမှုတွေအများကြီးနဲ့ကုသနေကြ. ကလေးများသည်သူတို့စကားကိုနားမထောင်. သူတို့ကသူတို့ရဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ပညာ၏သတင်းရင်းမြစ်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်.
USA တွင်, များစွာသောလူအသက်အရွယ်ကျော်လူငယ်တနျဖိုးထား. အကြီးအကဲတစ်ဦးဒုက္ခသည်များရှိသည်သောအသိပညာ၏တစ်ဦးကအများကြီးကသူတို့အိမ်ပြန်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်များကဲ့သို့အသုံးဝင်သောမဟုတ်ပါဘူး. ဥပမာ, အဟောင်းဒုက္ခသည်နွားတွေမှလယ်ယာသို့မဟုတ်ထိန်းအကြောင်းကိုပေမယ် America မှာအများကြီးသိစေခြင်းငှါ, သူ့မိသားစုကရုံးအဆောက်အဦမှာအလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါ.
တခါတလေ, အဟောင်းတွေဒုက္ခသည်များအသုံးမကျခံစားရရန်စတင်. ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုမျှဝေနှင့်သင့်အိမ်ကတိုင်းပြည်အတွက်ချည်ထားသင့်မိသားစုကိုစောင့်ရှောက်သင့်အဘို့အလွန်အရေးကြီးသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. လည်း, ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်ရာသစ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားပြုမူစေခြင်းငှါသော်လည်းကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ဖို့ကြိုးစား, သူတို့နေဆဲမင်းကိုချစ်နိုင်ပါတယ်.
အဟောင်းတွေသရဏဂုံကိုထောက်ပံ့သောတိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းအချို့တကယ်ကောင်းသောအဖွဲ့အစည်းများလည်းရှိပါတယ်. သင်လုပ်နိုင်သည် အသက်ကြီးသူနှင့်မည်သို့အကြီးတန်းစင်တာကိုရှာဖွေသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေ.
အမေရိကန်ကြက်ခြေနီအဖွဲ့မှတဆင့်မိသားစုဝင်များ Find နှင့်ဆက်သွယ်ပါ
ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကလေးကအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ကလေးလျစ်လျူရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်တွေကနေကြွလာ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ကလေးများနေ့ရဲ့ဗျူရို နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.